Fanomezana dimy mety indrindra amin'ity Krismasy (I) ity: Accessories | Vaovao IPhone
Efa manakaiky ny krismasy ary efa tsikaritra eny amin'ny arabe sy ny fivarotana izany. Isika rehetra dia efa miaraka amin'ny lisitry ny fanomezana, ary satria misy foana ireo izay sarotra kokoa ny manome, dia tsy maharary fanampiana kely akory izany, ary eo amin'ny bilaogy natokana ho an'ny vokatra Apple, ahoana no tsy hanomezanao tari-dàlana ho anao Mety tsara ho an'ny ireo izay manana iPhone sy iPad. Amin'ity fizarana voalohany ity dia asehonay anao ny kojakoja sasany mety ho an'ny iPhone sy iPad, amin'ireo vidiny rehetra, ilaina ary azo antoka fa ho tian'izy ireo izay mandray azy ireo.
1 Avantree Universal Multiple Charger
2 Mijoroa roa ambin'ny folo South HiRise, iPhone sy iPad
3 Mophie PowerStation mini, bateria ivelany
4 Plantronics BackBeat Go 2, headset Bluetooth
5 Philips ORT2300C, mpandahateny Radio sy Bluetooth
Avantree Universal Multiple Charger
Miaraka amin'ny habetsaky ny fitaovana elektronika miangona ao an-trano dia sarotra kokoa ny manana plug tsy andoavam-bola handoavana azy ireo. Safidy tena tsara ny tobim-piantsenana marobe, fa ny ankamaroan'ireo izay hitanao dia lafo tokoa amin'ny zavatra atolony. Ity base Avantree ity dia misy vidiny lafo (in Amazon Izaho dia nividy azy tamin'ny vidin'ny € 39) ary manome ny fahafaha-manafatra fitaovana hatramin'ny 4 (iPhone, iPad na hafa). Tsy maintsy apetrakao ny tariby mba hahafahanao mameno ny fitaovana rehetra (tselatra, microUSB, sns). Izy io dia manana endrika tsara tarehy ihany koa ary ny boaty dia misy tariby microUSB fohy roa, fehy hanamboarana ny tariby sy ny tariby vita amin'ny fingotra hanova ny endrik'ilay fotony.
Mijoroa roa ambin'ny folo South HiRise, iPhone sy iPad
Izahay dia efa nanao famerenana tanteraka ny bilaogin'ity fotodrafitrasa fampifanarahana sy fampangatsiahana tena tsara ity, manan-kery ho an'ny iPhone sy iPad, vita amin'ny aliminioma ary misy amin'ny alimo sy mainty. Manana tombony izany afaka manitsy ny mpampitohy amin'ny haavony, mba hahafahantsika mampifandray ny fitaovantsika na dia amin'ny tranga matevina indrindra eny an-tsena aza tsy misy olana. Tena mahaliana ihany koa ny vidiny, ohatra, manana izany ianao amin'ny € 31,99 in Masinista.
Mophie PowerStation mini, bateria ivelany
Ny fizakantenan'ny iPhone 6 vaovao dia nitombo, indrindra ny an'ny iPhone 6 Plus, saingy tsy mampaninona mihitsy ny manana fanampiana kely amin'izany andro izany rehefa hangataka be dia be amin'ny fitaovantsika isika ary tsy te ho tavela. tafahitsoka rehefa ilaintsika indrindra izy ireo. Ny bateria Sophie Powerstation Mini dia manana fandanjana tsara eo amin'ny fampisehoana, ny habeny ary ny vidiny ary miaraka amin'ny 2500mAh mety aminy handefasana ny iPhone na iPad anao. Ho an'ny € 59,99 dia azonao izany Masinista.
Plantronics BackBeat Go 2, headset Bluetooth
Rehefa mitady headphones isika dia afaka mahita ny zava-drehetra sy amin'ny vidiny rehetra, ny zavatra sarotra dia ny mahita ireo izay manana vidiny mifanaraka amin'ny tombony lehibe. Izaho manokana dia aleoko foana ny fiononan'ny headphones Bluetooth, ary ity maodely Plantronics ity dia manana feo, fahaleovan-tena, famoronana ary vidiny mahaliana. Mahatohitra hatsembohana Raha te hampiasa azy ireo amin'ny fanatanjahan-tena ianao dia manana bokotra fanaraha-maso kely ho an'ny habetsahana sy ny filalaovana play, ary koa amin'ny fanantonana sy fanalana antso. Mifanaraka tanteraka amin'ny iPhone sy iPad, izy ireo koa dia manana mari-pamantarana akustika izay manondro ny saran'ny fihenan'ny bateria, ary koa ny fahitana azy eo amin'ny efijeran'ny fitaovanao noho ny kisary kely eo akaikin'ny famantarana Bluetooth. Fanomezana tonga lafatra amin'ny vidiny mahaliana, ohatra € 69,99 amin'ny Masinista.
Philips ORT2300C, mpandahateny Radio sy Bluetooth
Raha tena te hampiaiky volana anao ianao, na te-hanome fanomezana ho an'ny tena, aza mieritreritra intsony satria ity radio Philips sy mpandahateny Bluetooth ity no tadiavinao. Miaraka amina endrika mampahatsiahy an'ireo radio taloha, famaranana crème glossy ary manambatra ny Retro amin'ny maoderina, ity Philips ORT2300C ity dia iray amin'ireo lisitra faniriako izay tsy ho ela intsony rehefa mody. Radio DAB + sy FM, Bluetooth A2DP ary AVRCP ary ny fiasan'ny fanairana dia mameno ny antsipirihany an'ity fanomezana sarobidy ity. Manana izany ianao Amazon amin'ny € 122,89.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanomezana dimy mety indrindra amin'ity Krismasy (I) ity: Fitaovana
Raffle izahay batterie ivelany iPow 3200 ho an'ny iPhone
Malahelo anao izahay, iPod Classic